Iza no manao ny teboka The The Reward Foundation - Fitiavana, firaisana ary ny Internet
Home Lalàna Iza no manao an'ilay hafatra?
Ny firaisana, ny fitiavan-tena, ny fikarakarana sy ny pôrnôgrafia dia matetika mifamatotra ao anaty tranonkala sarotra. Ny fandefasana ny selfies sexy dia ampahany mahazatra eo amin'ny sehatry ny teknolojia ampiasain'ny tanora amin'izao fotoana izao, saingy mety hitarika amin'ny filazana amin'ny polisy izany ary hametraka ny tahirin-dry zareo.
Ny ankizivavy dia manan-danja amin'ny kolontsain'ny olo-malaza 'mahafatifaty' izay mampiroborobo ny mozika amin'ny vehivavy mitafy lamba, mitafy kiraro amin'ny fanandevozana ary mametraka fialantsiny amin'ny fomba amam-pihetseham-pananahana. Ny lehilahy kosa dia mifanohitra amin'ny akanjon'ny fitafiana ara-dalàna. Ny ankamaroan'ny vehivavy malaza sy ny kintana pôrnôjia dia manana tranonkala manokana ihany koa.
Amin'ny fampiasana smartphones, dia zatovovavy marobe no manahaka ireny sary mamoafady ireny ary mandefa azy ireo any amin'ny olon-droa miaraka amin'ny fanantenana hisintona ny sain'izy ireo. Ny zazalahy koa dia mandefa sary tsy mitongilana amin'ny 'satro-boninahitra' amin'ny fanantenana ny hampiaiky ny ankizivavy.
Ny fanadihadiana dia mitatitra fa zatovolahy maro no mangataka, na manery mihitsy, zatovovavy mba handefa sary toy izany. Mety efa nivadika tamin'ny ankizilahy mbola kely Playboy gazety, ny fironana androany dia ny hametaka ny sarin'ireo tovovavy tsy manan-danja, indrindra fa ny mpiara-mianatra aminy.
Ny sasany tovolahy dia azo antoka fa voaheloka noho ny fananana "sary vetaveta" noho ny fananana tena fitiavan-tanindrazana avy amin'ireo tovovavy tsy ampy taona. Na izany aza, ny ankamaroan'ny faharesen-dahatra dia zokiolona. Ireo olon-dehibe ireo dia mazàna mitaiza irery ny zandriny ary mamporisika ny ankizivavy mba handefa azy ireo ho tsy misy dikany. Matetika izy ireo dia mampiditra azy ireo amin'ny sehatra fifanakalozan-dresaka sy amin'ny tranokala miaraka amin'ny fanantenana ny hampivelatra ny fahatokisana sy ny fifankatiavana mba handresy lahatra azy ireo hihaona sy hanao firaisana amin'izy ireo raha tsy misy ny faneken'ny ray aman-dreny. Amin'ny toe-java-niseho ratsy kokoa, dia manambady azy ireo izy mba hialana amin'izy ireo.
Ny tetikady manaratsy dia mampiditra ny fampahalalana manokana avy amin'ny tanora amin'ny fampiasana azy ireo, mampitahotra azy ireo amin'ny fisalasalana ny ray aman-dreniny raha tsy manaiky ny hihaona amin'izy ireo amin'ny faniriana ara-pananahana.
Ny fikarohana momba ny mpametaveta ankizy dia manambara fa matetika ireo zokiolona ireo no manana ny antsoina hoe "fanilikilihana an-tsaina." Izany dia mandà ny herim-po amin'ny fitondran-tenany izy ireo na mikasa ny hanome tsiny ny ankizy amin'ny fitadiavana zokiolona ary noho izany dia ho fihantsiana.
<< Sexting ambanin'ny lalàn'i Angletera, Wales & NI Valio sary vetaveta >>